Ụzọ abụọ ka Nyefee ngwa Android
> Resource> Android> otú nyefee égwu ka Android
Hi niile, m dị nnọọ tiwapụrụ na ụlọ ọrụ kaadị ma nye iwu onwe m ihe HTC ọchịchọ. My ajụjụ bụ Olee otú m nyefee ngwa ọdịnala m zụrụ m dike na Ọchịchọ? M na m hụrụ ebe ahụ ọ na-eme na-akpaghị aka ma ike ịhụ ihe ọ bụla Ama Isee, Ken.
Ụbọchị ndị a, ọzọ na ndị ọzọ ndị na anyị na gburugburu na-awụlikwa elu ka Android ụgbọ mmiri. Na ọtụtụ Android ntị na mbadamba gburugburu, anyị na-emekarị na-ezukọta ọnụ na ịkekọrịta ngwa ọdịnala na Android ngwaọrụ. N'ihi na ọtụtụ n'ime anyị, na-egwu ngwa ọdịnala na-eweta nza nke fun, karịsịa mgbe anyị na owu na-ama. Ma, otú idetuo ngwa site enyi anyị si Android ntị ka anyị onwe anyị otu? Olee otú ị na-eche oge ọ bụla mgbe ị na-ụfọdụ mmasị ngwa ọdịnala na Internet na chọrọ iji wụnye gị Android ekwentị, ma ị nwere ibudata ngwa PC na mgbe ahụ akpali ha ka ha ọhụrụ gị na ekwentị?
N'ezie, Ọ bụghị a siri ike ihe nyefee ngwa Android si ọzọ Android ma ọ bụ nbudata ngwa site a website ozugbo na Android, dị ka ogologo oge na ị nwere Android ngwa manager - Wondershare MobileGo for Android (Windows) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Ma ị chọrọ download ngwa site weebụsaịtị ka Android igwe ma ọ bụ mbadamba nkume ma ọ transfer ngwa site gị otu Android ekwentị ọzọ, ọ nwere ike izute gị mkpa.
Cheta na: The nkuzi n'okpuru bụ banyere otú nyefee ngwa Android ekwentị na mbadamba na Wondershare MobileGo for Android (n'ihi na Windows ọrụ). Mac ọrụ nwere ike na-atụgharị nke Mac version maka enyemaka. E wezụga na, na Mac version anaghị akwado nbudata ngwa gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Part 1. Download na wụnye ngwa Android
Part 2. Paghaa ngwa Android ngwaọrụ site ọzọ
Na Wondershare MobileGo for Android (Windows) maka Free, ị na-enwe ike ibudata ọkacha mmasị gị ngwa ozugbo na-akpali gị Android ekwentị. E wezụga na, i nwere ike tinye ụfọdụ na-ewu ewu music na vidiyo weebụsaịtị site na nke ị na-ekwe ka ibudata music na vidiyo.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori MobileGo
Mgbe wụnye na launching MobileGo, jikọọ gị Android ekwentị na ya. Ozugbo gị jikọọ ekwentị, MobileGo ga chọpụta ekwentị gị na akpaghị aka. Mgbe ahụ, na Online Resource na ekpe kọlụm, pịa "+" ịgbakwunye mmasị ngwa website, dị ka AppBrain, ka MobileGo.
Nzọụkwụ 2. Download na wụnye ngwa
Mgbe ahụ, na-agagharị Google Play ahịa ma ọ bụ ndị ọzọ na-eji ngwa website. Họrọ ọkacha mmasị gị ngwa ọdịnala na budata ha. N'oge nbudata usoro, ị nwere ike pịa Download na ala-n'akụkụ aka ekpe na-elele nbudata usoro.
Mgbe ọ bụ n'elu, ngwa ọdịnala ga-ma zọpụta na kọmputa gị na arụnyere na gị na Android ekwentị n'otu oge, dị ka ogologo oge ekwentị gị na jikọọ na MobileGo.
Site n'enyemaka nke MobileGo, ị nwekwara ike iṅomi ngwa Android. Wezụga ya, ọ dịghị ihe ọ na-emerụ gị data, N'ihi ya, ị pụrụ ime ya n'enweghị.
Step1. Wụnye na ẹkedori MobileGo
Iji nweta mmalite, ị kwesịrị iji wụnye na igba egbe MobileGo for Android. Mgbe ahụ, bụ isi window ga-gbapụta. Ekem, ke MobileGo isi window, jikọọ gị abụọ Android igwe ma ọ bụ mbadamba ya ma obu site na eriri cables ma ọ bụ site Wi-Fi. Ozugbo ngwaọrụ abụọ jikọọ, MobileGo ga chọpụta ha. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ ngwaọrụ abụọ egosipụta n'ime isi
Nzọụkwụ 2. Copy ngwa Android si ọzọ Android
Ọzọ, n'okpuru gị isi iyi gam akporo ngwaọrụ, pịa "égwu" na-egosi na ngwa window. Họrọ ngwa na ị chọrọ nyefee. Pịa "Export ka". Na ndọpụta ndepụta, họrọ gị ebe device.Then, ngwa transfer amalite.
Ugbu a, ngwa ọdịnala na-na gị Android ekwentị. The nkuzi bụ otú mfe ma dị mfe. Download software na nwere agbalị!
Ihe kacha ụzọ Wụnye .apk Files na Android
Olee otú Bipute ozi ederede site na Samsung
Ihe Ị na-amaghị banyere Samsung Tọgharia Usoro
Olee otú Naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si HTC dike